Nahazo tombo-kase ny pasipaoro 'Martian Ink' ireo mpitsidika avy any UAE rehefa tonga
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana UAE » Nahazo tombo-kase ny pasipaoro 'Martian Ink' ireo mpitsidika avy any UAE rehefa tonga
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana UAE • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ho fahatsiarovana an'io fotoana manan-tantara io sy hankalazantsika ny fandresen'ny misiona amin'izao tontolo izao dia namorona hajia manokana natao pirinty tamin'ny 'Martian Ink' i UAE - vita tamin'ny vato basalt hita tany an'efitra UAE
Ny tombo-kase an'ny Martian Ink dia fahatsiarovana ny fahatongavan'ny Hope probe tany Mars
'Martian Ink' noforonina tamin'ny vatolampy hita tao amin'ny Red Planet
Ny hajia novokarin'ny Office Media Media an'ny Emira Arabo Mitambatra miaraka amin'ny seranam-piaramanidina Dubai
Ireo mpitsidika tonga any amin'ny seranam-piaramanidina UAE dia hahazo tombo-kase Martian Ink amin'ny pasipaorony, ho fahatsiarovana ny fahatongavan'i Hope probe manan-tantara tany Mars androany tolakandro.
Tandindon'ny ambition sy toro lalana mitarika ny firenena fa "Impossible is possible", ny fitomboka - novokarin'ny Emira Arabo Mitambatra Office ofisialin'ny governemanta miaraka amin'ny Seranam-piaramanidina any Dubai - hanolotra fampahatsiahivana tsy hay hadinoina momba ny vanim-potoana vaovao ho an'ny Arabo amin'ny ora sy habaka miaraka amina famakiana hafatra manokana: “Tonga tany Emirà ianao. Tonga any Mars amin'ny 09.02.2021 ny Emirates. ”
Ny tombo-kase momba ny pasipaoro manokana dia manamarika ny fahatongavan'ny sambon-danitra ho avy atsy Mars amin'ny 9 feb, rehefa nahomby tamin'ny fandreseny tamin'ny dingana farany indrindra ny iraka fidirana ao amin'ny orbit ny Red Planet. Ny fanadihadiana dia hanome ny sary feno voalohany ny atmosfera martiana.
Nangonina ireo vatolampy nandritra ny iraka manokana tany amin'ny faritra atsinanana amin'ny Al Hajar an'ny UAE ary ny Desert Mleiha an'i Sharjah dia namboarin'ireo manam-pahaizana sy manam-pahaizana momba ny vatosoa. Avy eo dia notorotoroina ho paty tsara izy ireo, maina tamin'ny masoandro, ary nafangaro tamin'ny dity mba hamoronana loko telo samy hafa izay maneho ny Red Planet - vonona ny hametahana ireo pasipaoro mpitsidika an'arivony.
Ny vatolampy Basalt, izay tsy misy afa-tsy amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao, dia an-tapitrisany taona maro ary manome ny tandavan-tendrombohitra UAE ny fijery masiaka azy ireo.
Khaled Al Shehhi, talen'ny Executive Sector Production sy Digital Communication Office, Office of the UAE Government Office, dia nilaza hoe: "Tamin'ny 20 Jolay 2020, nijery tamim-pifaliana izao tontolo izao rehefa nipoaka tany Mars ny fanantenana an'i Mission an'ny Emirates Mars. Ankehitriny, fito volana taty aoriana ny 9 febroary 2021, ny Hope Probe dia kasaina ho tonga amin'ny orbit ny Red Planet - dingana lehibe iray ho an'ny UAE sy ho an'ny tontolo Arabo izay maneho fanantenana ary mampita ny hetahetam-bahoaka sy ny antony manosika ny vahoaka ao amin'ny faritra handresy ireo fanamby maika indrindra hahatanteraka ny nofinofin'izy ireo. ”
Nanampy izy hoe: "Ho fahatsiarovana an'io vanim-potoana manan-tantara io sy hankalazantsika ny fandresen'ny misiona amin'izao tontolo izao dia namorona hajia manokana vita pirinty tamin'ny 'Martian Ink' izahay - vita amin'ny vato basalt hita tany an'efitra UAE. Ity dia hasiana tombo-kase amin'ny pasipaoron'ny mpitsidika rehetra any UAE izay tonga amin'izao fotoana izao mandritra ny fotoana voafetra. ”
Mirongatra ny fientanam-po amin'ny fidiran'ny Hope Probe manodidina an'i Mars - ny faritra mampidi-doza indrindra amin'ny diany, satria ny fanodinana dia mitaky ny famerenana ny sambon-danitra sy ny fandroahana ireo enina Delta-V enina an'ny Hope Probe ao anaty 'fandoroana 27 minitra mba hiadana haingana ny hafainganam-pandehan'ny sambon-danitra manomboka amin'ny 121,000 km / ora ka hatramin'ny 18,000 km / ora. Mandritra io dingana io, ny Mars Orbit Insertion, ny fifandraisana eo amin'ny fanadihadiana sy ny ekipan'ny Operations dia voatazona farafaharatsiny. Raha tafiditra tsara amin'ny orbit Martian izy, ny Hope Probe dia hifindra amin'ny sehatry ny siansa, ary haka sy handefa ny sary voalohany an'ny Mars ao anatin'ny herinandro.
Amin'izay fotoana izay dia hanomboka ny iraka ampanaovina azy ireo izy hananganana ny sary feno ny habakabaka martiana amin'ny alalàn'ny fitaovana siantifika telo mandroso izay hanohy hamindra ny angon-drakitry ny planeta mena mandritra ny taona maritiana iray, mitovy amin'ny 687 andro eto an-tany.
Andrasana ny iraka hanangonana angon-drakitra vaovao mihoatra ny 1,000 GB, izay zaraina amin'ireo andrimpanjakana akademika sy siantifika 200 manerantany.
Ny dian'ny Hope Probe manan-tantara mankany amin'ny Red Planet dia mifanojo amin'ny fankalazana iray taona hanamarihana ny Jobily volamena an'ny UAE.